Masinina mameno paoma sy andalana famokarana
Masinina mameno paoma sy famokarana tsipika famokarana: ny taranaka vaovao misy ny milina fameno voatabia dia novolavolain'ny orinay. Ny masinina dia mandray ny fandrefesana ny piston, mampiditra elektromekanika sy pneumatic, ary fehezin'ny PLC. Izy io dia manana rafitra matevina, endrika mety, ...
Tsipika famokarana voatabia / Ketchup
TOMATO PASTE PROCESSING LINE / MACHINE HANAO JAM 1. Fonosana: amponga aseptika 5-220L, kaline firapotsy, kitapo plastika, tavoahangy fitaratra sy ny sisa. rafitra, rafitra fanorotoroana, rafitra fanamafisam-peo alohan'ny fanafanana, fikolokoloana ...
Toe-javatra misy ankehitriny ny vokatra vita amin'ny ronono any Shina Miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny fari-piainan'ny olona dia mitaky vokatra vita amin'ny ronono avo lenta hatrany ny mpanjifa any an-toerana. Ny indostrian'ny ronono dia indostria mitombo haingana indrindra amin'ny indostrian'ny famokarana sakafo. Hatramin'ny fanavaozana ...
Momba ny ranom-boankazo
Mihisatra ny tsenan'ny ranom-boankazo, ary ny indostrian'ny ranom-boankazo NFC dia mivoatra haingana ny indostrian'ny zava-pisotro ao Chine dia efa ho iray tapitrisa tapitrisa yuan ny fanjifana, ary ny dividendy demografika dia mamaritra fa ny tsena marika ranom-boankazo avo lenta koa dia manana haben'ny tsena ...